ब्राइटन बीच संस्मरणहरू समानान्तर डर र आजको आर्थिक अनिश्चितता | मनोरञ्जन
स्थान: घर » पोष्ट गर्दै » मनोरञ्जन » ब्राइटन बीच संस्मरणहरू समानान्तर डर र आजको आर्थिक अनिश्चितता
संस्कृति • मनोरञ्जन • हवाई • अतिथि सत्कार उद्योग • समाचार • पर्यटन • यात्रा तार समाचार • चलिरहेका • संयुक्त राज्य अमेरिका
ब्राइटन बीच संस्मरणहरू समानान्तर डर र आजको आर्थिक अनिश्चितता
by डा। एन्टोन एन्डरसेन - eTN मा विशेष
TAG को छवि सौजन्य
द्वारा लिखित डा। एन्टोन एन्डरसेन - eTN मा विशेष
पछिल्लो वर्ष, जब अभिनेता समूह (TAG) होनोलुलुको ब्राड पावर थिएटरमा नील साइमनको "ब्राइटन बिच मेमोइर्स" उत्पादन गर्नका लागि नाटक र संगीतका विश्वका अग्रणी इजाजतपत्रदाता शमूएल फ्रेन्चलाई आवेदन दिए, उनीहरूलाई थाहा थिएन कि मार्च, २०२२ मा यो शो कत्तिको सान्दर्भिक हुनेछ। एक यहूदी परिवारको बारेमा जसको पोल्याण्डमा आफन्तहरू थिए जब हिटलरले अन्य देशहरूमा आक्रमण गर्ने पागलपनमा गए। यो अनिश्चितताको समय थियो, र संयुक्त राज्यमा आर्थिक उथलपुथलको बीचमा।
ब्राइटन बीच मेमोइर्स त्रयीको पहिलो रचना हो। यो न्यू जर्सीमा नील साइमनको किशोरावस्थाको अर्ध-आत्मकथा हो। २० वर्षदेखि थिएटर समीक्षक भए पनि मैले यो नाटक कहिल्यै देखेको थिइनँ। मैले इङ्गल्याण्डमा जाने ब्राइटन बिच हो, जहाँ राजा जर्ज IV ले आफ्नो शाही मंडप बनाएको ठानेको थिएँ। यो ब्राइटन बीच ब्रुकलिनको एउटा छिमेक हो, जसलाई "लिटिल ओडेसा" भनेर पनि चिनिन्छ ओडेसा, युक्रेन र यसको वातावरणबाट यहूदी शरणार्थीहरूको आगमनको कारण, सोभियत संघले उनीहरूलाई सताए पछि।
TAG मा मेरो अन्तिम भ्रमण सहस्राब्दीको पालोमा थियो जब फ्रान र वेन वार्डले "अमेरिका! प्याचवर्क रजाई।" विगत दुई दशकहरूमा अधिकांश निर्माणहरू कलात्मक निर्देशक ब्राड पावेलद्वारा निर्देशित गरिएको छ, र अहिले थिएटरले उनको नाम बोकेको छ। मलाई ब्राड पावेल थिएटर मनपर्छ यसको घनिष्ट वातावरणको लागि - यही कारणले गर्दा म लन्डनको वेस्ट एन्डलाई 42 औं स्ट्रिट थिएटरहरूमा प्राथमिकता दिन्छु। मेरो पुरानो प्रेमी नेडरल्याण्डर परिवारको भाग भएकोले, म धेरै फरक ठाउँहरूमा नाटकहरू हेर्ने अवसर पाउँदा भाग्यशाली थिएँ, र घनिष्ठ सेटिङहरू सधैं मेरो मनपर्ने थिए।
ब्राइटन बीच मेमोइर्स नील साइमनको केहि हदसम्म अलंकृत कथा हो, जसलाई नाटकमा यूजीन भनिन्छ। यूजीनलाई मिकी ग्राउले चित्रित गरेको, जसले टेलिभिजन श्रृंखला "हराएको" को आठ एपिसोडहरूमा Zach खेलेको थियो। उसको प्रदर्शन निर्दोष थियो भनेर मैले तपाईलाई भन्न आवश्यक छैन, उसको बायोडाटा आफैं बोल्छ। मिकीकी आमा, बेकी माल्टबी, जो एक अभिनेता पनि थिए, आन्ट ब्लान्चेको भूमिका निभाएकी थिइन्। कमेडीलाई जोयस माल्टबीले निर्देशन गरेका थिए र सहायक निर्देशक मेलिन्डा माल्टबी थिए। माल्टबी परिवारमा प्रतिभाको शिपलोड छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। मिकीका बुवा डेनिस ग्रेउ हुन्, जो डन होका ब्यान्ड नेता थिए।
म हवाईमा बस्नुको कारण डो हो हो।
म हरेक दिन दिउँसो स्कुलबाट घर आउँथें र सन् १९७६ देखि १९७७ सम्म प्रसारण हुने एबीसीमा डोन हो शो हेर्थें। इन्डियानाका ती चिसो जाडो महिनाहरूमा, विशेष गरी जब यो शून्यभन्दा तल थियो, म आफैंसँग कसम खान्थे, हुकद्वारा वा बदमाश, एक दिन म बाँच्नेछु हवाई मा। र गोली द्वारा, मैले मेरो सपना साकार गरें।
ब्राइटन बिच मेमोइर्समा युजीन, म डन हो हेर्दा म जस्तै उमेरको हो। यूजीन ठूलो भएपछि उनी के बन्न चाहन्छन् भन्ने बारे भावुक छन्। यूजीनको परिवार निम्न मध्यम-वर्गीय छिमेकमा बस्छ। यूजीनले आफ्नो सांसारिक जीवनबाट बच्ने र बेसबल खेलाडी बन्ने सपना देख्छ। मलाई थाहा छैन कि यो एक पेशेवर बेसबल खेलाडी बन्न कस्तो छ, तर मेरो पूर्व प्रेमी, ब्रायन क्लटरबक, उही सपना थियो, र मिलवाउकी ब्रुअर्स को लागि पिचर बन्ने घाउ भयो। पछि, उनलाई डेट्रोइट टाइगर्सले काममा राख्यो। मलाई थाहा छ भविष्यको सपना देख्नु कस्तो हुन्छ। यूजीन कहिल्यै बेसबल खेलाडी भएनन्, तर उनी नील साइमन बने, र इतिहासमा कुनै पनि अन्य लेखक भन्दा बढी संयुक्त ओस्कर र टोनी पुरस्कार नामांकनहरू जितेका थिए। म विश्वास गर्छु कि नील साइमन युजीनको सपनालाई एथलेटिक्स तर्फ निर्देशित गर्नमा चतुर थिए, किनकि धेरै मानिसहरू त्यससँग सम्बन्धित हुन सक्छन् - पक्कै पनि पुलित्जर पुरस्कार जित्ने सपना देख्ने किशोरहरूको संख्या भन्दा धेरै।
म खुशी छु कि मैले ब्राइटन बीच मेमोइर्सको मौलिक राय लेख्नु पर्दैन। यसले दुई टोनी पुरस्कार जित्यो, र त्यो आफैंको लागि बोल्छ। बिल बुलार्डले एक पटक भनेका थिए, "विचार वास्तवमा मानव ज्ञानको सबैभन्दा कम रूप हो। यसमा कुनै जवाफदेहिता चाहिन्छ, कुनै बुझाइ चाहिन्छ। ज्ञानको उच्चतम रूप समानुभूति हो, किनकि यसले हामीलाई हाम्रो अहंकारलाई निलम्बन गर्न र अर्कोको संसारमा बस्न आवश्यक छ।"
जोयस माल्टबीले समानुभूति प्राप्त गर्ने प्रयासमा विजय हासिल गरे। उनले एउटा उत्पादन सिर्जना गरिन् जसले हामीलाई जेरोम परिवारको संसारमा सजिलै ढुवानी गर्दछ। यद्यपि मैले कहिल्यै गरिबीको अनुभव गरेको छैन, जोयसले हामीलाई गरिब हुनु कस्तो हुन्छ भनेर देखाउँछ, स्किमामा गरिमा र करुणा भर्छ, जसलाई कान्टले भन्नुहुन्छ। हिटलर र द ग्रेट डिप्रेसनको समयमा यो यहूदी परिवारले सामना गरेको डरको लागि जो कोहीले समानुभूति पाउन सक्ने कथाको साथ, कलाकारहरूले कथालाई जीवन्त बनायो।
म पहिले कहिल्यै प्लेबिल पढ्ने छैन, किनकि म यो मेरो प्रदर्शनको प्रतिक्रियालाई पूर्वाग्रह गर्न चाहन्न।
मेरो जीवनकालमा, मैले धेरै न्यूयोर्क यहूदीहरूसँग डेट गरेको छु, र "ज्याक जेरोम" ले आफ्नो उच्चारणलाई कसरी पूर्ण बनायो भनेर म छक्क परें। ज्याक जेरोम नाटकमा सबैभन्दा विश्वासयोग्य पात्र थिए। ऊ हिँड्यो, उसले कुरा गर्यो, उसले उत्तम शारीरिक डुरोललाई मूर्त रूप दियो। यो बाहिर जान्छ, Steven Katz न्यूयोर्क देखि हो।
यो TAG उत्पादन समानान्तर, लगभग eerily, युक्रेन को रूसी आक्रमण संग। हामी देख्छौं कि जेरोमहरू पूर्वी युरोपमा आफ्ना आफन्तहरूका लागि चिन्तित छन्। ती वर्षहरूमा, त्यहाँ कुनै टेलिभिजन वा इन्टरनेट थिएन जुन हामीलाई दिनहुँ के भइरहेको थियो देखाउनको लागि थियो। अब, सारा ग्रह आफैंलाई ब्रेसिङ गर्दैछ, युक्रेन आक्रमणले तेस्रो विश्वयुद्ध जन्माउने हो कि भनेर सोच्दै।
प्रदर्शन पछि, डोल क्यानरी केन्द्रको भव्य हलमा रमाईलो आफ्टरफ्लो थियो। हाम्रो साथी, रोबर्ट क्यानिनो, जो TAG सँग स्वयंसेवक हुनुहुन्छ, हामीसँग बसे र उनले ब्रैड पावेल थिएटरको लागि काम गर्न मन पराउनुभयो। हाम्रो लागि ब्राइटन बीच मेमोइर्समा भाग लिने उहाँको विचार थियो, र हामीलाई थाहा छ उहाँसँग राम्रो निर्णय छ।
1983 मा नील साइमन न्यूयोर्क थिएटर, नील साइमन थिएटर, 17 टोनी नामांकन र3जीत पछि, उनको सम्मानमा नामकरण गर्ने एकमात्र जीवित नाटककार बने। एक बिन्दुमा, उसले एकै समयमा ब्रडवेमा चारवटा सफल शोहरू चलाएको थियो। नील साइमनको नाटक हेर्नु आवश्यक छ, केवल अमेरिकी संस्कृति जान्नको लागि। यो प्रदर्शन बिल, वा प्लेबिल फिट हुन्छ, मैले भन्नु पर्छ।
ब्राड पावेल थिएटर Waikiki बाट पुग्न सजिलो छ। बस रुट 20 थिएटरको ठीक अगाडि रोकिन्छ। TAG एक 501(c)(3) संघीय मान्यता प्राप्त गैर-लाभकारी संस्था हो।
थिएटर बारे थप समाचार
थप मा: हवाई | #etn
Lyft को Uber? सुरक्षित वा खतरनाक हवाई|
हवाईमा जापान बाहेक पर्यटकको बाढी आएको छ हवाई|
हवाई सबैभन्दा कम सामाजिक सञ्जाल जुन राज्यहरूको सूचीमा शीर्ष स्थानमा छ हवाई|
EXPO TURISMO अन्तर्राष्ट्रिय: पनामाको महत्त्वपूर्ण पर्यटन शोकेस
किन अमेरिकी नागरिकहरूले रुस छोड्नु पर्छ?
थाइल्याण्ड याट शो को लागी सहज नौकायन
यात्रा र पर्यटन सम्झौता गतिविधि दर्ता
पाइलट थकान: तपाईं आकाशमा कति सुरक्षित हुनुहुन्छ?
IMEX नीति फोरम: पावर बिजनेस रिकभरीमा एकता
दक्षिणी रुसका ११ वटा विमानस्थलमा उडान प्रतिबन्ध थपिएको छ
रुसी पर्यटकसँग अब भिसाको विकल्प छ र...
बुद्ध धर्मको नयाँ राज्य लाओसमा छ
ब्रिस्बेनमा युनाइटेडको नयाँ उडानले पर्यटन...
डा। एन्टोन एन्डरसेन - eTN मा विशेष
म एक कानूनी मानवविज्ञानी हुँ। मेरो डॉक्टरेट कानून मा छ, र मेरो पोस्ट डक्टरेट स्नातक डिग्री सांस्कृतिक नृविज्ञान मा छ।